Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezahlukeneyo » UCycas wonwabile ngokuPhumela eSwitzerland
I-Cycas Hospitality iyaqhubeka nokuqhubela phambili inkqubo yayo yokwandisa amabhongo, ekubeni le nyanga ityikitye ihotele yayo yokuqala yaseSwitzerland.
Igumbi le-119 Holiday Inn Express & Suites Sion liya kusetyenziswa ngumqhubi we-pan-European ophumelele ibhaso phantsi kwesivumelwano sokuqala sokuqeshisa kunye neqela lotyalo-mali loLawulo lwe-Asethi ye-Credit Suisse.
I-Cycas kunye ne-IHG Iihotele kunye neeNdawo zokungcebeleka ziye zasebenzisana ukuzisa umbono wesibini weHoliday Inn Express & Suites eSwitzerland.
Ipotfoliyo yeCycas ngoku iquka amazwe ama-6 aseYurophu – iBelgium, iFransi, iJamani, iNetherlands, iSwitzerland, ne-UK.
Xa ivulwa ekwindla ngo-2024, ipropathi entsha eyakhiweyo iya kubonelela ngendibaniselwano yamagumbi angama-95 eHoliday Inn Express yakudala kunye neesuite ezingama-24 ezinekhitshi elikwisikhululo sikaloliwe saseSion, kunye nendawo yokutyela ekumgangatho ophantsi ukuze ithathe ithuba lendawo yayo edlamkileyo ngaphakathi entsha yesithili saseCour de Gare kunye neholo entsha yekonsathi. Iindwendwe ziya kuba nakho ukuthatha ithuba le-24/7 gym kunye negumbi lokuhlangana.
Ihotele iya kuba sembindini wophuhliso olukhulu lwezorhwebo olujonge ukwenza imali kwisikhundla se-Sion njengendawo yezoqoqosho kunye nezorhwebo kulo mmandla kwaye idibanise umbindi wesixeko oguqukayo kunye nedolophu endala.
Iprojekthi entsha yeCour de Gare, ekhokelwa yiComptoir Immobilier, iza kudibanisa ngaphezulu kwe-10,300m² yeeofisi, amagumbi angama-300 kunye ne-5,700m² yendawo yokuthengisa. Ikhompleksi iya kubandakanya enye yeekonsathi ezinkulu kunye neeholo zenkomfa kwi-Valais canton - edityaniswe nehotele - kunye nokupakishwa kweemoto ezingaphantsi komhlaba kwiimoto ze-625.
Ihotele ikwabekwe kakuhle kwiziko lophando lwezenzululwazi le-EPFL Valais Wallis - iziko eligqwesileyo elinabasebenzi abangaphezu kwama-400 - elibandakanya i-Energypolis School of Engineering campus.
Njengekomkhulu laseValais - enye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eSwitzerland - ihotele entsha ibekwe ngokufanelekileyo ukuthatha ithuba lezona ndawo zaseYurophu zokuchithela i-ski. I-Four Valleys, eyona ndawo inkulu yokutyibilika e-Ski yaseSwitzerland, okwangoku ikuhambo lwemizuzu engama-30 kuphela, kodwa inokufikeleleka ngakumbi kwiminyaka embalwa yokuvulwa kwehotele ukuba iprojekthi entsha ecetywayo yemoto yentambo iya phambili ibonelela ngoqhagamshelo oluthe ngqo lwemizuzu engama-20 ukusuka isikhululo esingummelwane ukuya kumathambeka.
ISion ikwangaphakathi kweyure yokufikelela eZermatt, Verbier, Chamonix Mont-Blanc kunye nePortes du Soleil. Yeyona ndawo inkulu idityanisiweyo yokutyibiliza emhlabeni.